Home » Akụkọ Njem njem Hawaii » Kedu ka ndị njem nleta na-emetụta ụlọ nkwari akụ Hawaii
Kedu ka ndị njem nleta na-emetụta ụlọ nkwari akụ Hawaii
N'agbanyeghị ọnụọgụ ndị njem na-arị elu na-abịa Hawaii, ụlọ oriri na ọ hotelsụ hotelsụ na February 2021 kọọrọ na-aga n'ihu na-adalata na ego ha ga enweta n'ime ụlọ ọ bụla (RevPAR), ọnụego ụbọchị ọ bụla (ADR), na ebe obibi ma e jiri ya tụnyere February 2020 ka njem na-aga n'ihu na-emetụta njem nlegharị anya nke ukwuu site na COVID- 19 oria ojoo.
Nyocha a gụnyere ihe 148 ma ọ bụ 81.4 pasent nke ụlọ obibi niile na 86.0 pasent nke ụlọ obibi na-arụ ọrụ nwere ụlọ 20 ma ọ bụ karịa.
N’ọnwa Febụwarị, ọtụtụ ndị njem si na steeti na-ejegharị ma na-eme njem ga-agafe ihe ga-eme ka iwu ichebe onwe onye nke obodo ụbọchị iri.
Ego ụlọ nkwari akụ nke Hawaii na-enweta na steeti niile ka ọ ruru $ 111.2 nde (-72.1%) na February.
Dabere na Akụkọ Hotellọ Ọrụ Hotellọ Ọrụ Hawaii nke Hawaii Tourism Authority (HTA) Ngalaba Nchọpụta bipụtara, ụlọ nkwari akụ nke mba niile na RevPAR belata na $ 79 (-69.9%), ADR dara na $ 259 (-16.5%), na ndị bi na ya jụrụ 30.5 pasent (- 54.0 pasent isi) na February 2021. Ihe nchoputa nke akụkọ ahụ jiri data nke STR, Inc., jikọtara, nke na-eduzi nyocha kachasị ukwuu na nke kachasị nke ụlọ nkwari akụ na Hawaiian Islands. Na February, nyocha ahụ gụnyere akụ 148 na-anọchi anya ụlọ 43,266, ma ọ bụ pasent 81.4 nke ụlọ obibi niile na 86.0 pasent nke ụlọ obibi na-arụ ọrụ nwere ọnụ ụlọ 20 ma ọ bụ karịa na Hawaiian Islands, gụnyere ọrụ zuru oke, ọrụ pere mpe, na ụlọ ezumike. Agunyeghi ezumike ezumike na ihe ndi ozo n'oge nyocha a.
N'ime ọnwa Febụwarị, ọtụtụ ndị njem si na steeti na-ejegharị ma na-ejegharị na mpaghara na-agagharị na steeti nwere ike ịgbachi mbọ iji aka ha wezuga onwe ha iche nke ụbọchị iri na ụma site na nkwado COVID-10 NAAT na-esite n'aka Onye Mmekọ Ule Tụkwasịrị Obi site na mmemme nchekwa njem nke steeti. Ndị njem trans-Pacific niile na-esonye na mmemme nnwale tupu njem a chọrọ ka ha nwee nsonaazụ nnwale na-adịghị mma tupu ha apụ na Hawaii. Kauai County nọgidere na-akwụsịtụ nwa oge na nsonye ya na mmemme njem nchekwa nke steeti, na-eme ka ọ dị mkpa maka ndị njem trans-Pacific niile na Kauai ka ha kpọpụ iche mgbe ha rutere ma e wezụga ndị na-esonye na mmemme nnwale tupu na njem na "ebe a na-eme njem" ihe onwunwe dika uzo iji belata oge ha. Obodo nke Hawaii, Maui na Kalawao (Molokai) nwekwara ndi iche iche iche na February.
Ime ụlọ nkwari akụ nke Hawaii ụtụ steeti niile dara na $ 111.2 nde (-72.1%) na February. Nchọpụta ụlọ bụ 429,700 ụlọ abalị (-66.5%) na nnyefe ụlọ bụ 1.4 nde ụlọ abalị (-7.3%). Ọtụtụ ihe mechiri emechi ma ọ bụ belatara arụmọrụ bido na Eprel 2020. Ọ bụrụ na agbakọ oge ibi na Febụwarị 2021 dabere na mbubata ọrịa na-efe efe na Febụwarị 2019, obibi ga-abụ 28.4 pasent maka ọnwa ahụ.
Klas niile nke ụlọ nkwari akụ nke Hawaii na-akọ akụkọ banyere steeti RevPAR na February ma e jiri ya tụnyere otu afọ gara aga. Njirimara klasị ndụ nweta RevPAR nke $ 188 (-61.0%), yana ADR dị elu na $ 729 (+ 19.5%) nke imeju nke 25.8 pasent (-53.4 pasent) jikọtara. Midscale & Economy Class properties nwetara RevPAR nke $ 65 (-64.3%) na ADR na $ 171 (-18.3%) na obibi nke 37.9 pasent (-48.8 pasent isi).
Ogige agwaetiti anọ nke Hawaii niile kọrọ obere RevPAR, ADR na ebe obibi ma e jiri ya tụnyere otu afọ gara aga. Maui Hotelslọ oriri na ọ ledụ ledụ ndị ọchịchị duru mpaghara na February RevPAR nke $ 141 (-63.8%), yana ADR na $ 446 (-7.3%) na obibi nke 31.7 pasent (-49.5 pasent ihe). Onu ogugu Maui nke February bu 354,800 ime ulo (-0.3%). Mpaghara ntụrụndụ nke Maui nke Wailea nwere RevPAR nke $ 239 (-61.9%), na ADR na $ 758 (+ 7.5%) na obibi nke 31.5 pasent (-57.5 pasent isi). Mpaghara Lahaina / Kaanapali / Kapalua nwere RevPAR nke $ 104 (-67.8%), ADR na $ 364 (-9.1%) na obibi nke 28.7 pasent (-52.3 pasent isi).